Ny tombotsoa azo avy amin'ny fanorenana modely ho an'ny indostrian'ny fonenana
Manoreno izay misy ny talenta na azo noforonina
Raha tokony ho ny fahaiza-manao izay tsy maintsy hita na mitondra any amin'ny toeram-ponenan'ny firenena dia tokony hametraka amin'ny foitra izay misy asa an-tsitrapo sy misy.
Hitady teti-bola kely kokoa manerana ny firenena
Ny rafitra fananganana trano tsy maintsy atao dia mahatonga ny fampivelarana na dia trano tokana mahasoa sy mahomby aza, ny toerana misy habetsahan'ireo lozam-pifaneraserana kely izay eo anelanelan'ny 1 sy ny filazàna ny trano 30 azo hatsangana dia ny vahaolana. Izany dia hanatsotra sy hanamaivana ny drafitra fandaminana ary ny tranonkala rehetra dia afaka mivoatra avy hatrany.
Fomba fanorenana mahomby kokoa
Tsy maintsy mampihatra ireo teknikan'ny famokarana Henry Ford ho an'ny trano izay hitondra ny fanatsarana ara-toekarena, ara-logistika ary ara-potoana izay hamaha ny logjam. Ireo fahombiazana ireo koa dia hampidina ny vidin'ny kitapom-bola amin'ny toerana iray ahafahan'ny trano indray mendrika.
Betsaka ny fitaovana ampiasaina
Araka ny efa voalaza alohan'io biriky sy loko io dia manana tsy fahampiam-pandrefesana ny trano fonenana, misy endriny an-jatony ankehitriny izay manome maimaim-poana be indrindra amin'ny hafanana sy ny hatsiaka.